China ENGLISH DIAMOND LIGHTSTICK ifektri abakhiqizi | UMfula Ichibi
ISIZULU IDAYIMANE LIGHTSTICK
Khanya Nathi inikeza izinduku ezivuthayo ezisezingeni eliphakeme kakhulu ngentengo engaphansi kwenqwaba. Okwethu izinti zokukhanya kokudoba zinobungani bemvelo, ziqhekekile futhi zivikela ukumelana nobumswakama.
Zisebenza kanjani izinduku ezivutha ukudoba?
I-Fishing Glow Sticks isebenzisa ukusabela kwamakhemikhali ukukhipha ukukhanya. Lapho nje i-capsule yangaphakathi iphukile ngokugoba induku, ukusabela kwamakhemikhali kwenzeka futhi induku yokukhanya yokudoba iqala ukukhanya.
Kungani ukudoba ukuvutha kwenduku kusiza ukubamba izinhlanzi eziningi?
Kwenza ukubhebhetheka kubukeke kukhanya ukuheha izinhlanzi eziningi
Kwenza ukuheha kubonakale kukhulu
Kushukumisa ngokuphumelelayo izinhlanzi zemizwa ezingathathi hlangothi noma ezingezinhle ukuba zilume
Enye yezinkinga ezinkulu ngokudoba ebusuku ukubona amathiphu enduku. Abanye abantu bathanda ukusebenzisa izinsimbi ukwazisa ukulunywa yizinhlanzi. Kodwa-ke, izinsimbi zingaba nzima ukubamba lapho ziphonswa noma zivuselelwa ezinhlanzini. Induku yokukhanya yokudoba ingasetshenziselwa ukufaka izinsimbi esikhundleni sokuqapha njalo amathiphu enduku.
Izinti zokukhanya zokudoba zihlanganiswe kanjani kolayini noma izingwegwe zokuloba?
Sebenzisa imikhono yepulasitiki eza nezinduku ukunamathisela izingwegwe noma ulayini. Faka intambo emincane emkhonweni, bese ufaka induku yokukhanyisa emkhonweni, ngentambo ezacile iqine, ubophele intambo kulayini noma kwihhuku. Amanye amakhasimende ethu asebenzisa i-tape kagesi ukunamathisela.
Zivutha isikhathi esingakanani?
Okungenani amahora angu-6.
Ingabe awunabo ubuthi? Futhi Yimiphi imibala etholakalayo?
Yebo ayinabo ubuthi. Iyatholakala ngoGreen.
Ukupakisha kwethu kwemboni: 2pcs / isikhwama, 50bag / ibhokisi langaphakathi, Ingqikithi yama-100pcs
Amanye amabhizinisi asepulatifomu ukupakisha: 5pcs / isikhwama, 10bag / ibhokisi langaphakathi, Ingqikithi yama-50pcs
Intengo yefektri yethu iphansi kakhulu. Asiyona inkampani yokuhweba,
Sinikeza inzuzo yabaphakathi ngqo kumakhasimende ethu.
E-China, Singumkhiqizi wokuqala onguchwepheshe bokudoba izinti zokukhanya.
Ngokwesisekelo semboni ephelele ehola ubuchwepheshe befomula, imikhiqizo yethu ingaphila emakethe iminyaka engaphezu kwengu-20.
Imikhiqizo yethu i-3/5 yemakethe yonke yomhlaba.
Imikhiqizo eminingi emakethe iyasilingisa, kanti eminye yenziwa ngefomula yemikhiqizo yesizukulwane sokuqala. Isikhathi se-luminescence somkhiqizo wesizukulwane sokuqala singaphansi kwengxenye yesihlanu kulowo womkhiqizo wethu wamanje
Ngibheke phambili ekwakheni ukubambisana nawe！
Ukupakisha : 2pcs / pack, 50packs / box, noma ngokuya ngezidingo zamakhasimende.
Inkokhelo: Isiqinisekiso seTT / Paypal / Trade nokunye
Langaphambilini AMAKHUMI AMAKHOMPI NGESIKHWAMA
Olandelayo: I-squid jig hook imfanzi yokhuni
Ukudoba Glow Light Stick
Ukukhanya Induku Light
Izinduku Zokudoba Zokudoba
ukuvutha endaweni yokudoba emnyama
mini ukuvutha izinti zokudoba
induku yokudoba ebusuku
izinti zokukhanya ezincane zokudoba
I-Factory Direct φ4.5 isibani sokukhanyisa idayimane lesiNgisi
AMAKHUMI AMAKHOMPI NGESIKHWAMA
I-Factory direct L 2L 3L U uchungechunge lwesibani
5pcs / Bag 10 Hours Glow Sticks Ukudoba Ukuntanta Lig ...
Factory Direct 50bag / ibhokisi Ukudoba Glow Stick Fis ...
Imboni i-lightstick yedayimane eqondile yasefektri